Ma jeclaan in aad si ay u gudbiyaan xiriirada, files music, fariimaha qoraalka ah, sawiro, videos, cajalado cod ka qalab Huawei si iPhone? Waa hagaag, habka ma fududa, sida telefoonada, kuwaas oo ay ka shaqeeyaan laba dhufto ee aad u kala duwan. Waxa aad maamuli kartaa si ay u gudbiyaan faylasha gaar ah iyo barnaamijyadooda la Play Google iyo muuqaalada iCloud ee, laakiin qalabka dhumin kartaa dhowr saacadood ama maalmood xitaa kala wareejinta xogta walaacsan.
Qalabka Free bixiyaan faa'iidooyin xadidan
Tani waxay u muuqan yaabaa in cajiib ah, laakiin ma jiraan wax app ee bilaashka ah ama qalab kale oo laga heli karaa internet-ka in ay ku wareejin karaa qadarka wayn ee xiriirada, iyo fariimaha qoraalka ah ka dukaamada Huawei in qalab macruufka ah. Inta badan xogta goobaha iyo barnaamijyadooda wareejinta siin karaan si ay u gudbiyaan audio, video files iyo sanamyadii. Muuqaalada Free ka iCloud, Lugood, iyo Google play kaliya u hagaagsan karo xiriirada, faylasha gaar ah, oo iyaga lagu wareejiyo qalabka la nidaamka qalliinka la mid ah. Plus, sida horey loogu soo magacaabay, kuwaas oo lacag la'aan ah qalab qaadan kartaa ilaa dhowr saacadood oo xitaa maalmo mararka qaarkood si ay u gudbiyaan oo kaliya dhowr files. Waxay sidoo kale u baahan tahay xidhiidh ah internet firfircoon leh kaalmada xogta weyn u hagaagsan oo dhan ka kooban si ay server.
Wondershare MobileTrans Content ka mid qalab wareejin karaan in kale in hal click
Ma jiro wax u werwero, Wondershare MobileTrans xogta oo dhan ka qalab Huawei bedeli karaa iPhone in hal click. Nidaamka gelineya inaad si ay u gudbiyaan images, videos, files music, jadwalka taariikhda, xiriirada, abuse wac, barnaamijyadooda, iyo ugu muhiimsan, fariimaha qoraalka ah ee hal click. Waxaa la Android, Nokia, Nokia Symbian, Blackberry ka shaqeeya, iyo macruufka ku shaqeeya qalabka. Waxaase yaab leh, software ah ula shaqaysaa in ka badan laba kun oo qalabka.
Talaabooyinka si ay u gudbiyaan xiriirada ka Huawei si iPhone
Ka dib markii ay ku rakibidda iyo ordaya software ah, dooro phone in doorasho kala iibsiga telefoonka. Connect labada qalabka si aad PC isticmaalaya fiilooyinka USB, mar ku xiran, ee MobileTrans suuqa kala tusin lahaa qalabka ku xiran sida Huawei (Model in aad ku xidhan in aad PC) iyo iPhone.
MobileTrans Suuqa kala sidoo kale soo bandhigi doona noocyada files in lagu wareejin karaa. Dhammaan wixii aad u baahan tahay inaad samayso waa guji sanduuqyada jeegga u content in aad rabto in lagu wareejiyo, ka dibna, guji "bilaaban nuqul" doorasho. MobileTrans Bilaabi doonaa koobi ka mid ah aalad si kale oo dhan xogta.
Waxa kale oo aad dooran kartaa in aad ku kaydiso nuqul ka mid ah macluumaadka aad telefoonka ee dhammaan on your computer shakhsi ka dibna lagu wareejiyo in aad dukaamada waaweyn marka loo baahdo. In la abuuro gurmad aad kombuutarka, kaliya ay tagaan software-ka ee guriga menu, iyo dooro "kaabta" doorasho. Nidaamka abuuri doonaa gurmad xogta ka phone daqiiqo gudahood.
Waa kuwee Huawei qalab aad u isticmaali?
Chinese brand-Huawei laga yaabaa in aanay sida uu shacbiyad u Samsung ama Apple oo dalka Mareykanka ah, laakiin waxaa loo arkaa calaamad saddexaad ee ugu weyn saaraha phone smart adduun. In 2013, shirkadda geeyey ku dhawaad ​​4.8 million telefoonada smart. Its telefoonka loo yaqaan Mate kori 2- 4G laga yaabaa inay tahay telefoonka ee dalka Mareykanka smart ugu caansan ee shirkadda ee.
Inta badan telefoonada ee Huawei iyo aaladaha internet / broadband waxaa lagu gadaa sida qalabka side tilmaamay. Sidaas, dad badan oo isticmaalaya qalabka shirkadda, laakiin waxay si fudud ma aha war ku saabsan saaraha. Huawei uu ixtiraam badan qaarada Asian halkaas oo ay weli loo jecel yahay sida gaare qalabka shirkadaha isgaarsiinta.
shirkadaha isgaarsiinta. Dooro mid ka mid ah in aad loo isticmaalo, waxaa loo isticmaalaya ama lagu doonayo in hoos ku isticmaali:
1> kori Mate 2
2> kori Mate 7
3> kori P7
4> Huawei farmagaadho 4G
5> Huawei cable mas'uul dambe
6> Huawei qeybo 2
9> Huawei hadal urur B1
10> Huawei kasaarka midabka sanduuqa kaca mini
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Huawei si iPhone